Taunggyi - The Cherry Land: အင်းသားရိုးရာလှေပြိုင်ပွဲ (၂)
ဖောင်တော်ဦးဘုရား ရတနာ စံကျောင်းတော် ၀င်ပွဲမှာ ကျင်းပတဲ့ အင်းသားရိုးရာ လှေပြိုင်ပွဲမှာ တွေ့ကြုံခဲ့တာလေးကို ပြောပြဖို့ရှိပါတယ်.. အင်းသားရိုးရာလှေပြိုင်ပွဲမှာ ၂၆တက်၊ ၄၆တက်နဲ့ ရာကျော်တက် ဆိုပြီး အတန်း (၃)တန်းပါဝင်ပါတယ်.. အဲ့ဒီ အတန်းတွေထဲက ၂၆တက်ပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ အမျိူးသမီးတွေနဲ့ ကျောင်းသား အရွယ်တွေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြပါတယ်..
ကျင်းပတဲ့ နေရာကတော့ ရတနာစံကျောင်းတော် ရှေ့က ရေလမ်းချောင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. ဘေးတစ်ဘက် တစ်ချက်ဆီမှာတော့ ၀ိုင်းဝန်းအားပေးနေကြတဲ့ လူအုပ်ကြီးရှိပါတယ်.. လှေတွေပေါ်ကနေ အများစုက ကြည့်ရှူနေကြပါတယ်.. ပြိုင်ပွဲကိုတော့ ဖောင်တော်ဦးဘုရားများ စံကျောင်းတော်ပေါ် ပင့်ဆောင်လို့ ပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်.. ကနဦးပွဲစဉ်တွေကို ယှဉ်ပြိုင်ထားပြီး ဖြစ်တာမို့ အဲ့ဒီနေ့ကတော့ အကြို ဗိုလ်လုပွဲနဲ့ ဗိုလ်လုပွဲတွေပဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်..
ပွဲစဉ်တိုင်းနီးပါး လက်ရည်တူ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြပြီး၊ အမှတ်ပေး နေရာမှာရှိတဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပေးမဲ့ ၀ါးလုံးကို အရင်လှမ်းဆွဲနိုင်တဲ့ အသင်းတွေက အနိုင်ရသွားကြပါတယ်.. ထူးထူးခြားခြား အဖြစ်အပျက်တွေလဲ မြင်ခဲ့ရပါသေးတယ်.. အမျိုးသမီး (၂၆)တက် လှေပြိုင်ပွဲမှာ ပြိုင်ပွဲဝင်လှေ ၀မ်းကွဲသွားပြီး ရေတွေဝင်လို့ နစ်သွားခဲ့ပါတယ်.. အင်းသူတွေကတော့ ရေကူးကျွမ်းပြီးသားဆိုတော့ ဘာမှတော့ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး.. တကယ်ဆိုရင် ပြိုင်ပွဲဝင်လှေတွေက အရမ်းကို ဇောက်တိမ်ပါတယ်.. ရေပေါ်ကို ပေါ်တယ်ဆိုရုံလေးသာ ရှိပြီး တစ်ယောက်လောက် ကမောက်ကမ လုပ်ရင် လှေမြုပ်မှာ သေချာပါတယ်..
အဲ့ဒီမှာ ပြောသံကြားခဲ့ရတာက ပြိုင်ပွဲဝင်စည်းမျဉ်းအရ လှေဟာ ပန်းတိုင်မရောက်ခင် မနစ်ရပါဘူး.. အကယ်လို့ အနိုင်ရသည့်တိုင် ပန်းတိုင်ကို လှေတစ်စီးလုံး မကျော်သေးတဲ့ အချိန်မှာ လှေနစ်သွားရင် ရှုံးပါတယ်.. လှေ မနစ်ရပါဘူး.. အခု ဖြစ်သွားတဲ့ အမျိုးသမီးပွဲမှာတော့ လှေက ကျော်ပြီးဖြစ်သွားတဲ့ အတွက် သူတို့ အနိုင်ရသွားပါတယ်.. နှစ်သင်းစလုံးကလဲ ဘယ်လောက်မှ မကြောကြပါဘူး.. အနိုင်ရသွားတဲ့ အသင်းက အရင် လှမ်းဆွဲလိုက်နိုင်လို့ အောင်ပွဲရသွားတာပါ.. လှေကတော့ ဟန်ချက်ပျက်ပြီး နစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်..
အဲ့ဒီ ၂၆တက်လှေက ကျောင်းသားပွဲမှာလဲ သုံးရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ လှေကွဲသွားတဲ့ အတွက် ကျောင်းသား အသင်းတစ်ဖွဲ့က ၄၆တက် လှေ အကြီးနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရပါတယ်.. ကျောင်းသားတွေကလဲ မျိုးဆက်သစ်တွေ ဖြစ်တာနဲ့အညီ အနိုင်အရှုံးအဓိက မထားပဲ လှေချင်း မတူပေမဲ့လဲ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်.. အဲ့ဒီ အသင်းကပဲ အနိုင်ရ ဗိုလ်ဆွဲသွား ပါတယ်.. နောက်ဆုံး ကျောင်းသား (၂၆)တက် ဗိုလ်လုပွဲလှေပြိုင်ပွဲမှာလဲ အလားတူ လှေမြုပ်တာ ဖြစ်သွားပါ သေးတယ်.. တစ်ဘက်နဲ့ တစ်ဘက် ယှဉ်ပြိုင်ရင်း လှေထဲ ရေ၀င်ပြီး နစ်တာဖြစ်ပါတယ်.. ကလေးတွေမို့ ဟန်ချက် မထိန်းနိုင်လို့ ဖြစ်တာလို့ ထင်ပါတယ်..
အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲ အင်းသာရိုးရာ လှေပြိုင်ပွဲက ကြည့်ရှုနေတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်.. `ယောက်ျား ညီစေ´လို့ သံချက်ဖောက်သံကလဲ အားရစရာ အားတက်စရာ အလွန်ကောင်းပါတယ်.. (ဒီတစ်ခေါက်မှပဲ ကျွန်တော်လဲ သူတို့ အသံကို နားလည်နိုင်တော့ပါတယ်.. ပထမတစ်ခေါက်တုန်းက ဘာဆိုကြမှန်း မသိလိုက်ဘူး.. ကျွန်တော့ အထင်ပြောရရင် အင်းသားတွေရဲ့ အသံက ထားဝယ်တွေအသံတွေနဲ့ ဆင်တူသလိုပါပဲ.. မြန်မာစကားကိုပဲ ၀ဲပြီး၊ ဖျက်ပြီး ပြောတာနဲ့တူပါတယ်.. `မတက်ဘူး´လို့ ဗမာတွေက ပြောတာကို သူတို့က `တက်တာ မဟုတ်ဘူးလေ´ လိုမျိုး တစ်မျိုးတစ်မြည် ထူးပြီး ပြောကြတာမျိုးနဲ့ တူပါတယ်.. ရှမ်းစကားတော့ ပြောမယ် မထင်ဘူး.. သူတို့ကလဲ ဗမာလူမျိုးတွေပဲ မဟုတ်လား..)
အဲ့ ပြန်ဆက်ရရင် နောက်ဆုံးတော့ နိုင်တဲ့ အသင်းတွေကို ဆုတွေပေးပြီး ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့တွေက.. ~~ ငွေသင်ဖြူးလေး ခင်းထားသလို ~~ သတင်းစကား ဆိုလောက်တယ် ~~ လှေလှော်ကာ တိမ်ကလေးတွေ အတောက်မယ် ~~ ရေပေါ်မှာ အိမ်ကလေးတွေ ဆောက်တယ် ~~ အမှောင်ဆိုင်းတဲ့ အလွမ်း ပန်းချီနယ်.. တောင်ပိုင်းရဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် ~~ မှန်းဆတွေးဝေနှော ရှမ်းမလေးတွေလဲ ချောပါတယ် ~~ သတင်းမွှေးတဲ့ အင်းလေးကန်သာဝယ် ~~ အဲ အဲ့ဒီစာသားတွေ ပါတဲ့ နောင်အင်းလေးကို အလည်လာခဲ့ပါ သီချင်းဆိုကြရင်း နဂါး ၀တ်စုံဝတ်ထားတဲ့ အင်းသူတွေက ကပြရင်း ကျန်တဲ့သူတွေကလဲ မြူးလို့ ပျော်လို့၊ ၂၀၀၇ခုနှစ် ဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲတော်သည် အောင်မြင်စွာနဲ့ ပြီးဆုံးသွာခဲ့ပါတယ်.. (ညဘက်မှာတော့ ဘုရားပွဲဈေးတန်း ရှိဦးမယ်နဲ့ တူပါတယ်.. )
နောင်အင်းလေး သီချင်း ရှာကြည့်တာ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Download Link
ရေးသားသူ yma အချိန် 10:34:00 PM
အညွှန်း: VirtualTour, ဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲ
Thanks for the download link for the music.
But INN THAR are not BAMA and not also SHAN..
INNTHAR is one of the race in MYANMAR. Do not mix up ...!
Tuesday, November 11, 2008 7:11:00 PM
Sunday, January 22, 2017 2:26:00 PM